Onye Bụ Ezi Ndị Na-ege Gị Ntị? | Martech Zone
Monday, April 5, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ka ị na-ede ọdịnaya gị ma ọ bụ sonye na mkparịta ụka site na mgbasa ozi mmekọrịta, ị maara onye nwere ike ịgụ, lelee ma leba anya? Imirikiti blọọgụ ụlọ ọrụ na onye m na-ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta na-egosi nghọta, mana ma eleghị anya ọ gafere ntakịrị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị na-ege ntị na-ege ntị abụghị ndị na-ege gị ntị n'ịntanetị. Ndị na-ege gị ntị nwere ike iso gị na-emekọrịta ihe ma na-akparịta ụka kwa ụbọchị - mana ha pere mpe. Ndị na-ege gị ntị, ndị a na-adịghị ahụ anya bụ n'ezie ọtụtụ. Ha na-agụ nwayọ, na-edetu ma na-ekpe ikpe ma ha agaghị n’ihu ma ọ bụ na ha agaghị.
Ndị na-ege gị ntị nwere ike ịbụ
Companylọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ onye ọchụnta ego na-enyocha ma ị ga-ewe gị n'ọrụ.
Ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ na-ekpebi ma ị bụ onye isi.
Ndị ndu ọgbakọ na-atụ gị maka ohere ị nwere ikwu okwu.
Ikekwe onye mbipụta akwụkwọ na-ekpebi ma ọdịnaya gị ọ ga-abụ akwụkwọ.
Ọga gị na ndị ọrụ ibe gị.
Ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị.
Onye na-achọ ịmata ihe nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ gị.
Onye oru ma obu onye ahia.
Gịnị bụ ozi ị na-achọ ịgwa onye ọ bụla n’ime ndị a na-ege ntị? Have nwere ụzọ ị ga - esi soro ndị na - ege ntị ọ bụla? You na-ekewapụ onwe gị na ụfọdụ ndị na-ege ntị? Anọ m na njikọ LinkedIn n'izu ole na ole gara aga mgbe onye nhazi ahụ wedara otu n'ime ndị otu ya ahụ n'ihu ọha. Amaara m na anaghị m mgbe chọrọ ịzụ ahịa na onye njikwa oge. O nwere ike ọ maghịdị na ya.
Kpachara anya banyere gburugburu gị, aha gị na ndị na-ege gị ntị ka ị na-arụ ọrụ. Inwere ike mechuo uzo ozo gi ma obu mebie ohere ahia gi ozo. Ndị na-ege ntị bụ ndị gị na ha na-esokarị abụghị ezigbo ndị na-ege ntị, ọ bụ naanị ha na-eme ka ị mara na ha nọ ebe ahụ. Ọ bụ ndị ị na-ahụghị ka ọ dị mkpa ka ị mara.
Tags: ndị na-ege ntịahana-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-ege ntị